Umzimba womuntu yinkimbinkimbi, eyinkimbinkimbi yokusebenza futhi okudingeka iphazanyiswe. Ukucindezeleka okuqhubekayo, ukucindezeleka, ukuguqula izimo zokuphila, ukungcola kwemvelo - izimo ezingaphazamisa impilo, inamba enkulu kakhulu. Yingakho, njalo unqotshwa ukushaywa kwimoya yangaphandle, kufanele uvakashele izindawo zokuthola futhi ululame njalo. AmaSanatoriya ahluke ezikhungweni ezivamile zokuzilibazisa ngokuthi anikeza izimo lapho umphefumulo nomzimba abakwazi ukuphumula kuphela ngesivinini sempilo yansuku zonke, kodwa futhi bathuthukise impilo yabo. Izinqubo ezehlukene zezokwelapha ngokubambisana nokuthula komkhakha wemvelo, izinga elihle lezinsizakalo kanye nezinhlobonhlobo zezintambo zikhokhiswa ngamandla okubuyela kumodi evamile yosuku. I-Sanatoria inhlobo yezinhlobo ezehlukene ezinezinhlelo ezahlukene zamasevisi namathuba. Phakathi kwabo, umuntu angakwazi ukuhlukanisa "Umthombo Omusha" - indawo yokuhlanza eVologda, ephethe iminyango evulekile, iyajabula ukuhlangana nabantu abafisa ukuba nesikhathi esihle futhi bafaneleke.
I-Sanatorium "I-New Spring" itholakala ngamakhilomitha amathathu ukusuka emgwaqweni omkhulu "Vologda - Novaya Ladoga", amakhilomitha angu-20 ukusuka eVologda. "Umthombo omusha" uhambele indawo yemvelo nepaki, okukuvumela ukuba ujabulele ubuhle nokuvumelana kwemvelo, ukuba ube yingxenye yalo, ukuba uphefumulelwe. Akukude nensimu esemqoka yendawo yokuhlanza yiMfula iTosno, onomthelela omuhle kuhulumeni. Endaweni lapho, kuzo zonke izinyathelo, ngokungafani nomuzi onomsindo, isimo sizikhumbuza kanye nenani laso, inqubo yokubuyisela amaphasi wezempilo ngenjabulo ekhethekile.
Indawo yokuhlala e-sanatorium
Izisekelo eziningi zokuzilibazisa nezokuvuselela zisondela ekwakheni izakhiwo eziyisisekelo zokuhlala, ngokucabangela izidingo kanye nezidingo zabahleli bamaholide. Ngendlela efanayo, "Umthombo omusha" usondele kulo mbuzo. I-sanatorium inikeza izakhamuzi zayo indawo yokuhlala emakamelweni amazinga ahlukene okududuzeka. Kungaba ngamakamelo angashadile angashadile namabili, anesitsha sokugeza, indlu yangasese kanye neshawa (isitampu). Amakamelo angenawo anesitsha esiqandisini ne-TV. Kungenzeka ukuhlala emakamelweni ofanayo, kodwa emva kokulungisa. Kuzo zonke zazo kukhona isiqandisisi, i-TV, neshawa. Igumbi lokunethezeka liqukethe amakamelo amabili ahlukene ngendlu yangasese, eshaweni noma egeza, i-TV, ucingo, i-kettle kagesi, insimbi nesitsha sezitsha. Lezi zindawo zitholakala ezakhiweni ezimbili ezixhunyaniswe ukushintshwa okushisayo uma kwenzeka isimo sezulu esibi, esiholela ekwakheni lwezokwelapha, ekamelweni lokudlela nasekliniki.
Izinkinga zezempilo zingahluka kakhulu, ngakho-ke ezikhungweni zalolu hlobo kufanele kube nendlela ephelele yokuxazulula isisombululo. "Umthombo omusha" (i-Vologda) yindawo yokuhlanza esiza ekwelapheni izifo zesimiso senhliziyo, isisu somzimba, ukuphefumula, izinhlelo zezinzwa kanye nesistimu ye-musculoskeletal. Inikeza izinsizakalo zayo kokubili abadala nabantwana. Izakhiwo zayo zokuxilonga nezokwelashwa zisiza ukubhekana nezinkinga futhi zithole injabulo ngesikhathi esifanayo.
Isikhungo seVologda "Novyi Sources" sinikezela ngezinsiza zokubuyisela impilo ngezindlela ezehlukene. Uhlu lwezinqubo umvakashi ngamunye angadlulela lukhulu kakhulu. Phakathi kwabo, i-hydrotherapy njengendlela yokudoba i-coniferous ne-mineral, i-hydrotherapy, ukwelashwa kwe-sauna, ukuphuza amanzi okuphuza amaminerali (kunezitshalo ezintathu zamaminerali ensimini, ngayinye inenhloso yayo), i-physiotherapy, umzimba we-physiotherapy kokubili ehholo nasemanzini, ukwelashwa kwezinyosi , Ukwamukela umzimba, ukuvimbela ukuvimbela ukuvimba, ukukhipha imithi, umculo kanye ne-phytotherapy. Futhi iyatholakala kulabo abavakashile yi-cryocamera, umhume womunyu, amakamelo akhethekile okwelashwa nge-puffs ne-hardware, ukuhlunga ngesandla. "Umthombo omusha" uyindawo yokuhlinzeka izivakashi zayo ngezeluleko zezokwelapha, ochwepheshe bephrofayli yesifo esiyinhloko kanye nezinkomba zezokwelapha eziphuthumayo. Izivivinyo zokuxilonga zenziwa.
Ukuzilibazisa enkulumweni "Umthombo omusha"
Esikhathini senkundla yesimiso nsuku zonke kukhona ukuhlolwa kwamafilimu adumile, kuvame ukuthi kukhona amakhonsathi abaculi futhi, uma befisa, abaholi bamaholide ngokwabo. "Umthombo omusha" yindawo yokuzijabulisa, enakekela imisebenzi ehlukahlukene yokuzilibazisa, ngakho-ke ihlanganisa njalo uhlu lokuzijabulisa olunikezwayo. Kubandakanya ukugibela amahhashi noma ukugibela amahhashi enqoleni, i-discs evamile yamanye amazwe asebekhulile abhekene nezinsizwa ezincane neziningi ezingathí sina, umkhakha omkhulu wokudlala nomtapo wabathandi abokuthula. Kukhona namatafula e-tennis, igumbi le-billiard, i-gym, izitolo, i-sauna ne-cafe. Ukuze uthole imali eyengeziwe ungakwazi ukuqasha imishini yezemidlalo. Futhi kukhona ithuba lokubona i-Vologda nesifunda, ukuvakashela izindawo ezivelele namamyuziyamu.